My Thoughts My Blog: August 2009
ကိုထူးအိမ်သင်ကိုယ်တိုင်ရေးကဗျာလေးပါ။ ၁၉၈၂ခုနှစ်က ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းမှာ"လင်းထက်"ဆိုတဲ့ကလောင်
ကိုထူးအိမ်သင် အားအမှတ်တရ ပြန်လည် တင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း မမေလည်း ဒီကဗျာကို သူ့ဘလော့ဂ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဧပြီလ က တင်ဖူးပါသည်။
Photo source. http://www.htooeainthin.com/ ကိုဖိုးသားဆိုဒ်မှာ ကူးယူတင်ပြပါသည်။
၂၂ နာရီ ၄၄ မိနစ်
ရေးသားသူ phoe thu taw at 10:48 PM
မနေ့က(၂.၀၈.၂၀၀၉) စာပေလောကစာအုပ်ဆိုင်မှ စာအုပ်တစ်အုပ်ကြိုက်တာနဲ့ဝယ်လာဖြစ်သည်။ စာအုပ်က ဆရာကြီး ၀င်းဖေ ရဲ့ မြကန်သာ (Emerald Lake) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ရဲ့အမှာစာမှာ ဦးဝင်းဖေက မြန်မာကို ကမ္ဘာက သိစေသော ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ မြန်မာ့အမွေကို ကမ္ဘာကရစေခြင်းငှာ မြန့်မာဂန္တ၀င် ကဗျာများကို မူရင်းမြန်မာ ဘာသာအပြင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ပြီး ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည် ဟု့ ရေးထားသည်။
စုစုပေါင်း မြန်မာ့ဂန္တ၀င်ကဗျာ အပုဒ် ၅၀ ပါဝင်သည်။ တစ်ချို့သော ကဗျာများက ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားဘ၀ မှာ သိကျွမ်းရင်းနှီးသင်ကြားခဲ့ရသော ကဗျာတွေပဲ ဖြစ်သည်။ ထိုကဗျာ အပုဒ် ၅၀ ထဲမှ ပို၍ရင်းနှီးသည်ဟု့ ခံစားရသော တောင်တွင်းရှင်ငြိမ်းမယ် ရေးသားသည့် " သူများလူမှာ" ဆိုတဲ့ ကဗျာကို ဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။
သူများလူမှာ စစ်သံကြားလျှင်၊ နာဖျားဥပါယ် ခိုကြတယ်၊
နှမလေး ပျိုတို့မောင်မှာ၊ စစ်သံကြားလျှင်၊ရွှေဓါးပိုက်ကာ၊
အိုးစားဖက်ကို လိုက်လို့ရှာသည်။ ရိက္ခာကနည်း၊ မိုးကသဲသနှင့်၊
သံတွဲကိုကူးပါလိမ့် မလားတော်။ ။
စစ်မှာရှမ်းမ၊ နှမလေးပျို့ထက်လှကို၊ ရမလို့လားတော်။
စစ်မှာဆွေမျိုး၊ ဘိုးဘွားမောင့်မှာ ရှိသလားတော်။
"စစ်မှာတစ်မူ၊ နှမလေးမယ့်ထက်ဖြူကို၊ မယူဘူးဗျာ။
စစ်မှာရှမ်းမ၊ နှမလေးမယ့်ထက်လှကို၊ မရဘူးဗျာ။
စစ်မှာဆွေမျိုး၊ ဘိုဘွားကျုပ်မှာ မရှိဘူးဗျာ။
ရေမြေ့သခင်၊ ရှင်ဘုရင်က၊ မိန့်တော်စာနှင့်၊ အပါချသည်၊ လိုက်ရတော့မယ်။
စစ်သည်ပုံမှာ၊ ကျွန်ယုံကဲ့သို့၊ မောင်ကလေ၊ မောင်သာလိုက်" တဲ့ တောင်ပတ်လည်နှင့်၊ ဇင်းမယ်ဆိုသည်၊ ညိုတဲ့မြို့မှာ ပျို့လွမ်းဖွယ်လေး။
ARE THERE KINSMEN IN WAR?
Dear one, good friends and sister-like.
When others hear the sounds of war,
they pretend sickness and other ills.
When my young man hears of war.
he takes down his sword and searches for
comrades to shear his campaign cooking pot.
With low rations, in heavy rain,
will he cross the hills to Sandoway?
Does war offerafairer maid?
Does war promiseapretty Shan girl?
Are there ancestors and kinsmen in war?
"I expect no fairer maid than you in the wars,
nor shall I getapretty Shan girl.
There are no kinsmen of mine in war.
I obey the orders of the Lord if the Land,
Witharoan horse,aforeign slave,
a bronze sword, andalongyi from Yun,
likealoyal warrior I follow the flag."
It shall break my heart that he is far away.
in hazy Zinme, surrounded by hills.
Shin Nyein Mai.
ရေးသားသူ phoe thu taw at 11:58 PM